မောင်စေတနာ: Junction Center
နေပြည်တော်မှာ Junction Center က နည်းနည်း နာမည်ကြီးနေတယ်။ ရန်ကုန်သူ ရန်ကုန်သားတွေ စုဝေးတဲ့ နေရာလို့လဲ ဆိုရမယ်။ ရန်ကုန်က ၀န်ထမ်းတွေ နေပြည်တော်ကို ပြောင်းရွှေ့လာကြရတော့ ရန်ကုန်က Shopping Center တွေကို လွမ်းနေကြမှာ မလွှဲပေါ့။
ဒီအချိန်မှာ Junction Center က ရန်ကုန် အလွမ်းပြေပေါ့။ ရန်ကုန် Shopping Center တွေမှာ လိုချင်တာကို တစ်နေရာထဲမှာ ရတော့ လူသက်သာပြီး စိတ်ချမ်းမြေ့ရတယ်။ ပိတ်ရက်ဆို လူကို တိုးနေရတယ်။ ဈေးဝယ်ကြ၊ ရုပ်ရှင်ကြည့်ကြနဲ့ လူကို ပြည့်နေတယ်။
ဒီတစ်ပတ် ပိတ်ရက်တနင်္ဂနွေနေ့မှာ နေပြည်တော် ရောက်တုန်း ရုပ်ရှင်ကြည့်ဖြစ်တယ်။ ကားက မာမီရှိန်းတဲ့။ အချစ်ဟာသ ဇာတ်မြူးလေး။ ရုပ်ရှင်ရုံက Mini လေးပါ။ အရာရာကို လေ့လာတတ်တော့ ခုံတွေကို ရေကြည့်မိတယ်။ တစ်တန်းမှာ (၁၈)ခုံ၊ (၁၂)တန်းဆိုတော့ ၂၁၆ ခုံရှိတယ်။ ဈေးနှုန်းတွေက ၁၀၀၀၊ ၁၅၀၀၊ ၂၀၀၀ တဲ့။ ခြားနားထားတဲ့ စည်းတွေတော့ မတွေ့ဘူး။ မိမိတို့ တက္ကသိုလ်ကျောင်းတွေမှာ သင်တဲ့ စာသင်ခန်းတွေလိုမျိုး။ အောက်ကနေ အပေါ်ကို မြင့်တက်သွားတယ်။ အမြင့်ဆုံးက ၂၀၀၀။
၁၅၀၀ တန်းက ကြည့်ဖြစ်တယ်။ မိမိတို့နောက်မှာ ခုံတန်းနှစ်တန်းပဲ ရှိတော့တယ်။ အဲဒါက ၂၀၀၀ တန်းတဲ့လေ။ ရုပ်ရှင်ရုံအနေအထားကို သေချာကြည့်မိတယ်။ အောက်က ကော်ဇော်အနီ ခင်းထားတယ်။ လူတွေက မုန့်တွေစားပြီး အမှိုက်တွေ ပစ်ချတယ်။ ကုန်ပါပြီ ကော်ဇော်တော့။ Standard ကတော့ ခပ်မြင့်မြင့်ပဲ။ ထိုင်ခုံတွေက ဆိုဖာအသေးစားတွေ။ ကြာကြာ ထိုင်ကြည့်တာ မညောင်းဘူး။ Air Con ကတော့ အေးပါတယ်။ ရုံက သေးတာကိုး။ :)
ရုပ်ရှင် စပြပါပြီ။ မာမီရှိန်း .... ရန်အောင်၊ နေတိုး၊ အိန္ဒြာကျော်ဇင်၊ သဉ္ဖာဝင့်ကျော် တို့ပါတယ်။ ဇာတ်ကားက တော်တော် ရယ်ရတယ်။ မကြည့်ရသေးရင် သွားကြည့်ကြလေ။ ကောင်းတယ်။ ညွှန်းလိုက်ပြီနော်။ :)
Junction Center နဲ့ ဇာတ်ကားအကြောင်း လာဖတ်သွားပါတယ်ဗျာ
10:40 AM, November 15, 2009
Kyaw Min Tun said...
Yes, I saw some people eating sunflower seeds in movie house and dropped it on the carpet last five years. It isavery bad habit. Our Myanmar people must take care of that sort of bad habit.